ဒီလူတွေပါလို့ ပြလိုက်တာတောင် မဖမ်းဘူးလားလို့ မေးခွန်းထုတ်နေခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး…
ဒီလူတွေပါလို့ ပြလိုက်တာတောင် မဖမ်းဘူးလားလို့ မေးခွန်းထုတ်နေခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး… ဗစ်တိုးရီးယားလေးက ဒီလူတွေပါလို့ ပြလိုက်တာတောင် မဖမ်းဘူးလား ဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်နေကြတဲ့ အပေါ်မှာ တရားခံဘယ်သူလို့ပြောပေမယ့် ဖမ်းလို့မရသေးတဲ့အကြောင်းရင်းကို ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုကို အစကတည်းကလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပြီး ကူညီပေးနေသူ သက္ကမိုးညို မှ အများသိအောင် တင်ပြထားခြင်းကို ApannPyay မှ ပြန်လည် […]
အားလုံးဂရုစိုက်ကြပါ အရမ်းအတင်းရဲ နေကြပါတယ် (ရုပ်သံ)
အားလုံးဂရုစိုက်ကြပါ အရမ်းအတင်းရဲ နေကြပါတယ် (ရုပ်သံ) အရမ်းအတင်းရဲ နေကြပါတယ်…. 11-9-19 မနက်(၈:၁၀) မိနစ် ချိန် မန္တလေး မြို့ ၃၃ လမ်း ၇၃လမ်းနှင့် ၇၄ လမ်း ရှိ ဝေဝေ ခေါက်ဆွဲဆိုင် မှာ ခေါက်ဆွဲ ထိုင်စားနေတဲ့ချိန် ထိုင်ခုံဘေးနားချထားတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်အဖြူရောင် […]
တံခါးပိတ်ပီး ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေတာတောင် မလုံခြုံတော့ပါလား (ရုပ်သံ)
တံခါးပိတ်ပီး ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေတာတောင် မလုံခြုံတော့ပါလား (ရုပ်သံ) အားလုံးသတိထားကြပါ….. ခေတ်ကြီးက အရမ်းကိုကြောက်ဖို့ကောင်းလာနေပါပီ …. သတိ၊ ၀ီရိယလေးနဲ့ နေထိုင်ကြပါ …။ သူများပစ္စည်း အချောင်လိုချင်နေတဲ့သူတွေက တစ်နေ့တစ်ခြား များများလိုက်လာနေပါပီ …။ ခုလဲကြည့်ပလား ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ်နေတာတောင် အချောင်သမား လုယက်သမားက အိမ်လိပ်စာမေးတာလိုလိုနဲ့ ဆွဲကြိုးလုပြေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် […]
တရားရုံးတွင် ဗစ်တိုးရီးယားလေးက ကိုကို ညီညီ ဓာတ်ပုံကို ဖနောင့်နှင့်ပေါက်ပြီး လက်ဖြင့်ထုရိုက်ပြ
တရားရုံးတွင် ဗစ်တိုးရီးယားလေးက ကိုကို ညီညီ ဓာတ်ပုံကို ဖနောင့်နှင့်ပေါက်ပြီး လက်ဖြင့်ထုရိုက်ပြ နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးတွင် လူအများစိတ်ဝင်စားနေသည့် ဗစ်တိုးရီးယားအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ခရိုင်တရားသူကြီး နှစ်ဦးရှေ့တွင် ဗစ်တိုးရီးယားလေးက ကိုကိုညီညီ ဓာတ်ပုံကို ရွေးချယ်ပြခဲ့ကာ ဖနောင့်နှင့်ပေါက်၍ လက်ဖြင့်ထုရိုက်ပြခဲ့ကြောင်း ယင်းတရားရုံးမှ သိရှိရပါတယ် …။ ရှေ့နေ့ ဒေါ်ရွက်နုအောင်ကလည်း […]
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် သမီးအရင်းကို ဖခင်ဖြစ်သူက အဓမ္မအကြိမ်ကြိမ် ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် အသက် ၁၃နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်အား ဖခင်ဖြစ်သူက အဓမ္မအကြိမ်ကြိမ် ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည် …. ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ အမှတ် ၁၈ရပ်ကွက်၊ ဒေါ်ဖွားရှင်လမ်း(ကျူး) အခန်း ၃၌ သမီးကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ၁၃နှစ်အရွယ် သမီးကို […]
ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ခိုးသွားပေမယ့် ပိုင်ရှင်ဆီကရော သိတဲ့သူတိုင်းဆီကပါ မေတ္တာတွေရသွားတဲ့ သူခိုး
ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ခိုးသွားပေမယ့် ပိုင်ရှင်ဆီကရော သိတဲ့သူတိုင်းဆီကပါ မေတ္တာတွေရသွားတဲ့ သူခိုး ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ခိုးသွားပေမယ့် အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကို အခိုးခံရသူဆီပြန်ပေးသွားတဲ့ အာဂသူခိုး ပဲဖြစ်ပါတယ် …။ ဒီနေ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာနာမည်ကြီးခဲ့တာကတော့ လူတစ်ယောက်ဆီကနေ ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ခိုးသွားပေမယ့် အရေးကြီးတဲ့မှတ်ပုံတင်နဲ့ atm ကတ်တွေကို ပြန်ပေးသွားတဲ့ ပီဘိသူခိုးတစ်ယောက်အကြောင်းပါပဲ […]
” ထူးခြားမိုးလေဝသအခြေအနေသတင်း” “ပိုဒူး” မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် တနိုင်ငံလုံး မိုးကြီးမည်၊ ရေကြီး မြေပြိုခြင်းများ သတိပြုရန်လို
” ထူးခြားမိုးလေဝသအခြေအနေသတင်း” “ပိုဒူး” မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် တနိုင်ငံလုံး မိုးကြီးမည်၊ ရေကြီး မြေပြိုခြင်းများ သတိပြုရန်လို “ပိုဒူး” မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် တနိုင်ငံလုံး မိုးကြီးမည်၊ ရေကြီး မြေပြိုခြင်းများ သတိပြုရန်လို ” ထူးခြားမိုးလေဝသအခြေအနေသတင်း” ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ(၂၉)ရက်နေ့ (မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၉:၀၀)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်) ထူးခြားမိုးလေဝသအခြေအနေသတင်း အမှတ်စဉ်(၀၉/၂၀၁၉) […]
နေပြည်​​တော်​ ငလိုက်​​ချောင်းန​ဘေးမှာ ၁၈ချက်​ချုပ်​ရတဲ့အထိ မုဒိန်းကျင့်​ခံရတဲ့ (၇) နှစ် ​သမီး​လေး ….
နေပြည်​​တော်​ ငလိုက်​​ချောင်းန​ဘေးမှာ ၁၈ချက်​ချုပ်​ရတဲ့အထိ မုဒိန်းကျင့်​ခံရတဲ့ (၇) နှစ် ​သမီး​လေး …. နေပြည်​​တော်​ ငလိုက်​​ချောင်းန​ဘေးမှာ ၁၈ချက်​ချုပ်​ရတဲ့အထိ မုဒိန်းကျင့်​ခံရတဲ့ ၇နှစ်​သမီး​လေး ဆင်းရဲလွန်းသဖြင့်​ ဆရာမများပင်​ သတင်း​မေး မလာ​ကြောင်းသိရှိရပါတယ် …။ သမီးငယ်​​လေး​နေအိမ်​ သမီးငယ်​​လေးရဲ့ ဒဏ်​ရာ နေပြည်တော် မှာ ဖြစ်တဲ့ နောက်ထပ် […]